ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Battumur CHIMEDDORJ အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Battumur CHIMEDDORJ အား မတ်လ ၂၅ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း နှင့်အတူ ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး တက်ရောက်သည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း လွှတ်တော်သို့လာရောက်လေ့လာသည့် အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသား/သူများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် မတ် လ ၂၅ ရက်နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လွှတ်တော်ကျင်းပနေမှုအား လာရောက်လေ့လာ သည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်မှ အခြေခံပညာအထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားကျောင်းသူ (၆၉) ဦးနှင့် ကျောင်းသားမိဘ(၂၇) ဦးတို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးများရုံး (OHCHR) မှ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Ms. Heike Aletsen ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် ကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးများရုံး (OHCHR) မှ အရှေ့တောင်အာရှဒေသဆိုင်ရာရုံး၏ ဒုတိယအကြီးအကဲ ဖြစ်သူ Ms. Heike Aletsen ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ နံနက် ၉နာရီ အချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်ရေးရာဆောင် (I-1) ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ The Elders(ရပ်မိရပ်ဖများ)အဖွဲ့အစည်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms. Gro Harlem Brundtland နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဖြစ်သူ The Elders(ရပ်မိရပ်ဖများ) အဖွဲ့အစည်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Ms. Gro Harlem Brundtland နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ မတ် ၂၄ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် နော်ဝေနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဟောင်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Fumio KISHIDA အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Fumio KISHIDA အား မတ်လ ၂၄ရက် ညနေ ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Robina Patricia Marks အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက သူရဦးရွှေမန်း သည် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Robina Patricia Marks အား မတ်လ ၁၉ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီ ၃၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၁)ရက်မြောက်နေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း(၁)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၄)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒသမနေ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း အပိုင်း(၃)